I-acid ye-folic yabasetyhini abakhulelweyo
I-aclic acid i-vitamin ebaluleke kakhulu kwabasetyhini abakhulelweyo, kodwa imiselwe nje kuphela ngexesha lokunyuka, kodwa nakwinqanaba lokucwangcisa ukukhulelwa. Igama lesibili li-vitamin B9. Yiyo le nto ethatha inxaxheba ngokuthe ngqo kwinkqubo ye-DNA synthesis, kunye ne-hemopoiesis, ukwahlukana kweeseli nokukhula. Le vivamitha iyadingeka ngokukhawuleza ngumzimba ngexesha lokubeka ityhubhu ye-neural, apho ukuphuhliswa kwenkqubo yesantya yengane ezayo kwenzeka.
Yintoni ekhokelela ekunqongopheni kwe-asidi folic emzimbeni?
Ngokuphindaphindiweyo phakathi kwabasetyhini abakhulelweyo, umbuzo ubangelwa ukuba kutheni i-folic acid iyadingeka ngumzimba kwaye yintoni ebangelwa ukusilela kwayo. Ngoko, ukungabikho kwale vithamini emzimbeni kunokukhokelela eku:
ukubunjwa kweziphene kwinkqubo yesantya yomntu (i-hydrocephalus, i-cerebral hernia, njl);
ukungalungi kwenkqubo ye-cardiovascular system;
Ingxaki yokugqibela kunye nokwanda kwenzeni yokukhupha isisu ngokusweleka kwe-folic acid. Ukongezelela, abo bafazi abathi, xa bethatha umntwana, bengenayo i-vitamin B9, banakho ukuvelisa iimpawu ze-toxicosis, ukudandatheka, i-anemia.
Kufuneka kaninzi kangakanani kunye nezilingo zokuthatha i-folic acid?
Abafazi, ukufunda ngesidingo se-aclic acid, cinga ngendlela yokuyithatha abafazi abakhulelweyo, ubuninzi bokusela ngosuku. Ngokutsho kweemfuno zonyango ezamkelekileyo, umntu omdala unelungelo elingama 200 μg ngosuku. Nangona kunjalo, kubafazi abakhulelweyo, umlinganiselo osisiseko we-folic acid uphindwe kabini, kwaye u-400 μg ngosuku. Konke kuxhomekeke kubukhulu bokungabikho kwevithamini kumzimba womfazi.
Inqanaba eliqhelekileyo apho i-vitamin B9 ikhiqizwa ngu-1000 μg. Ngoko ke, umfazi udlalela i-tablet 1 ngosuku.
Ngaba iziyobisi ziqukethe i-folic acid?
Ngokuqhelekileyo, abafazi abathwele umntwana baqulunqwe ngqo kwi-vitamin B9. Nangona kunjalo, kukho amanye amalungiselelo kwabasetyhini abakhulelweyo, aqulethe i-folic acid ekubunjweni kwabo.
Ngoko, eziqhelekileyo zezi:
I-Vitrum ngaphambi kokubeleka;
Izi yobisi zibhalwe ngasentla zibhekisela kwiivitamin complexes eziqukethe i-folic acid ekubunjweni kwazo. Nangona kunjalo, umxholo wale candelo kumalungiselelo anjalo ahluke, ngoko kuyimfuneko ukuqwalasela umyinge we-folic acid ekutyunjweni kwe-vitham complex. Umzekelo, iFolio iqukethe 400 μg, iMera - 1000 μg, i-Pregnavit - 750 μg.
Kutheni ukugqithiswa kwe-asidi folic emzimbeni kunokudluliselwa?
Nangona ukuba i-folic acid ayinayo nayiphi na into enobungozi emzimbeni, ukugqithiswa kweziyobisi kusenokwenzeka. Umxholo ogqithiseleyo we-vitamin B9 egazini ukhokelela ekunciphiseni ukuxininiswa kwe-vitamin B12, okubangelwa ukuphazamiseka kwegazi, ukunyanyiswa kwesisu, kunye nokunyuka kwamanzi.
Nangona kunjalo, iziganeko ezinjalo zijongwa ngokungabonakaliyo, umzekelo, ukuba ibhinqa malunga neenyanga ezi-3 okanye ngaphezulu kuya kuthatha usuku ukuya ku-10-15 mg yesilwanyana.
Ukongezelela, kubalulekile ukuqwalasela ukuba i-folic acid ingangena kumzimba kunye nokutya. Ngoko, i-walnuts, i-almonds, i-i-riet (i-oatmeal, i-rik bucheheat rice), imbewu ye-sunflower, iimveliso zobisi ezivuthiweyo, njl njl., Zizityebi kule vhamini. Ngoko ke, ukuba ibhinqa lithatha isilungiselelo equkethe i-folic acid, inani lezinto zokutya ekuncitsheni kufuneka linciphise.
Ngaloo ndlela, abafazi abakhulelweyo, besazi i-dosage ye-folic acid, efuna ukuyithatha, akufanele bathathe isilwanyana bodwa ngaphandle kokubonisana nodokotela.
I-dropper ye-magnesium ngexesha lokukhulelwa - yintoni na?
HCG xa iphindwe kabini
I-Doppler ngexesha lokukhulelwa - yintoni na?
Inkcazo yepelvic ye-fetus - iiveki ezingama-30
Umculo weklasikazi ngabafazi abakhulelweyo
Iiveki le-15 yokukhulelwa - ukuva kwiisisu
Indlela yokuchonga iR Rh ye-fetus?
Iiveki ezingama-31 zokukhulelwa - kwenzekani?
Kutheni abafazi abakhulelweyo bengakwazi ukuya emngcwabeni?
Ukuhlolwa kwe-Ultrasound ngeveki ye-12 yokukhulelwa-okuqhelekileyo
I-Sea buckthorn - zokupheka zokupheka
Ukujongana netheyili ngaphantsi kwelitye le-facade
Indlela yokwenza ushizi?
Ingakanani ukupheka i-apricot jam?
Ngaphandle kolwandle, amahlaya awonakele, kwaye kutheni ...
Ukulahlwa kwamadonki kunye nama-strawberries
Intsingiselo ye tattoo yeentaka
Amanzi e-aquarium ekhaya
Umthandazo wokuxolelwa kwezono
Ithebhulethi okanye i-smartphone - into engcono?
Imigaqo yokuziphatha kwenkampu yenkathalo yosuku
Indlela yokuthatha iprotheni yokulahleka kwesisindo?
I-Nolitsin - izibonakaliso zokusetyenziswa nokubaluleka kweziyobisi
Princess Evgenia kunye noJack Brooksbank kwisithombe sokudubula ngokuhlonela
UJosh Hartnett noTamsin Egerton baya kuphinda babe ngabazali